Olee otú Iji Zụlite Travel Na Europe na Thalys | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Zụlite Travel Na Europe na Thalys
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 18/09/2020)
Ejegharị ejegharị na-Europe na-a tụsiri maka ọtụtụ. Na ọ bụrụ na ị na-na na dabara nwere ohere tinye akà rà na nke a na-aga anya gị ịwụ ndepụta na-ahụ niile ebe kasị mma na Europe, ị ga-chọrọ ka ahụmahụ dị ka kwesịrị ncheta dị ka o kwere. Ya mere ntị ka otú Zụlite Travel na Europe na Thalys.
Train njem bụ savviest ụzọ afanyekwa a otutu nlegharị anya na Europe. The Thalys bụ elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè akara na nwere ike ị na-niile isi obodo na style na ọsọ mgbe na-adịghị imebi gị nchekwa.
Ga-esi Mara Famous "Red Train"
Mgbe ị na-azụ Travel na Europe na Thalys, The ụgbọ oloko na-mara dị ka "The Red Train" maka vibrant red agba nke ya engine, nke bụ usoro ụgbọ oloko dị elu nke nwere ike ijikọ gị 17 obodo gafee Western Europe na nkasi obi. The Thalys akara na-emi esịnede French-Belgium elu-ọsọ ụgbọ oloko, na-eje ozi Amsterdam site na HSL. Na Brussels eje ozi dị ka-ehiwe maka akara, i nwere ike iru isi obodo na Europe dị ka Paris, Liège, Amsterdam, Antwerp, Cologne, na The Hague.
ndị a elu-ọsọ ụgbọ oloko njem na gbapụrụ ọsọ nke 300 km kwa hour. The ụgbọ okporo ígwè akara bụ nzuzo na-aga site Brussels na Paris na n'okpuru otu awa na ọkara. Ma i nwere ike na-esi Paris n'ụzọ nile Amsterdam na naanị 3 awa na 20 m! The Thalys eme ka ndị ọzọ karịa 50 gburugburu ụgbọ okporo ígwè njem ụbọchị ọ bụla. Enwere 27 azụ a ụbọchị na-agba ọsọ Paris - Brussels ụzọ naanị.
Ịhọrọ Right Class
Ha nwere atọ ọmụmụ nke ọrụ ịhọrọ site na mgbe ị na-Train Travel na Europe na Thalys - Standard, Nkasi Obi, na Premium.
Ma Nkasi obi na Premium klas na-enye "1st klas" aba ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ ụgbọ okporo ígwè njem ná nkasi obi nke mma-eri oche na-enye ndị ọzọ legroom. The isi nke ị na-ahọrọ Premium bụ na ụgbọ okporo ígwè mkpara ijere gị nri na ọṅụṅụ na oche gị. Ị ga-enwe ohere na Thalys lounges na Paris na Brussels.
The oche Nkasi obi na Premium mere ndokwa na a 2 + 1 ụkpụrụ. Na na onye ọ bụla ụlọ, ị ga-ahụ 1 table iban, na-eme ka ya zuru okè n'ihi na-ejegharị ejegharị na nwunye. Standard ma ọ bụ "2nd klas" oche nọ a 2 + 2 ụkpụrụ gafee ụgbọ ala.
All na klas na-enye WiFi internet onboard, ohere na ụlọ mmanya-nkuru n'onwe, na naanị ike gị soket maka ịkwụnye gị na ngwaọrụ.
Ịzụ Tickets maka Train Travel na Europe na Thalys
Ọ bụ iwu na-eme ka ụgbọ okporo ígwè abụọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na Thalys ụgbọ oloko. The Thalys ụgbọ oloko na-elu-achọ n'aka wee jide n'aka na ị akwụkwọ ụgbọ oloko gị tiketi ka o kwere mee tupu.
I nwere ike na-edebe oche na Thalys ruo 90 ụbọchị tupu. Ma ọ bụrụ na ị na AKWỤKWỌ gị Train Ticket Early, i nwere ike ichekwa ruo 75%!
Iji mee ka obi abụọ na Train Travel na Europe na Thalys, Book A Train Online. Anyị na-arụ ọrụ na Thalys iji hụ na ị na-agaghị ebubo ọ bụla ntinye akwụkwọ ụgwọ ma na-kacha mma udu-ekwe omume.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-europe-thalys%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#traveleurope europetravel trainjourney Tranride ụgbọ oloko traintip ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem Travel njegharị travelfrance travelgermany ejegharị nje ndi njem traveltips